Maitiro ekuisa chirongwa cheOCR paDebian | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yadarika ndanga ndichiverenga manhamba akati wandei emagwaro andaive nawo kumba. Zvinyorwa zvinotora nzvimbo uye izvo zvandinoda kusunungura asi hazvidi kurasikirwa. Ndokusaka kutsvaga internet kwandakawana mhinduro yakanangana nechirongwa cheOCR uye kamera yekamera
Iine smartphone kamera Ini ndaitora mifananidzo gwaro uye ndobva ndamhanya chirongwa cheOCR kumufananidzo kugadzira zvinyorwa zvinyorwa kuitira kuti zvigone kushandiswa nekuchengetedza pakombuta. Asi Ndeipi chirongwa chekushandisa pakuzivikanwa kweOCR paDebian kana kumwe kugoverwa kweGnu / Linux?
Kutsvaga paInternet, ini ndakawana akati wandei mawebhusaiti aitaura nezverudzi urwu rwechirongwa. MuGnu / Linux, chirongwa cheOCR chinoumbwa neinjini yekucherechedza uye chimiro. Kana iri injini yekucherechedza, pane yakanaka kwazvo inonzi tesseract-ocr (Ini pachangu ndakaiyedza uye inoshanda mushe mushe) inova ndiyo yatinozoshandisa uye interface, mune ino kesi, isu tichasarudza gImageReader.
Saka, kuti tiise iyo isu tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
sudo aptitude install tesseract-ocr tesseract-ocr-spa gimagereader
Kamwe kuiswa kwacho kwapera, Tinofanira kumhanya gImageReader uye yakagadzirira kushandisa. Isu tinongofanirwa kusarudza mufananidzo kana batch yemifananidzo iyo yatinoda kuisa kudigital uye tinya sarudzo iripamusoro inonzi "Ziva Zvese". Izvi zvichatanga kuzivikanwa kwechimiro chegwaro uye Pota iyo kune txt gwaro yatinokwanisa kuvhura nechero zvinyorwa zvemavara.
Iyo gImageReader interface inonzwisisika uye iri nyore kushandisa, saka kushandisa chirongwa cheOCR kuri nyore uye nekukurumidza, zvichiita iro basa rekuverenga zvinyorwa zvemagwaro zvive nyore.
Ehezve, kana tiine magwaro akasarudzika, tinofanirwa kuenda nemufananidzo mushure memufananidzo nekuti kana tikazviita sebatch yemifananidzo, isu taizogadzira imwe txt gwaro nezvose zvinyorwa zvemagwaro. Chero zvazvingaitika, hapasisina chikonzero chekutora zvinyorwa zvedu zvemadhijitari Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa chirongwa cheOCR paDebian
Uchishandisa nharembozha kuongorora isipi zano rakaipa, zvitengere yakachipa pairi scanner uye inokupa mibairo irinani pane nhare inodhura pamusika
Zvakanaka kwazvo, ndinofungidzira kuti inomhanyawo paUbuntu uye zvigadzirwa. unofanira kuzviedza. Kwaziso.
Ndatenda kwazvo!… Iyi gImageReader Chirongwa Chinyatsonaka! Yaive yakakosha pane yangu Linux-Debian-Q4OS Ini ndaida iyo nekukurumidza zvakanyanya; kukwanisa kudhirowa mimwe mifananidzo, kubva kuCoexistence Manual, muResidential Complex; iyo yaive pabepa kwemakore makumi maviri, uye yaifanira kuvandudzwa! Kutanga tarisa gwaro rese, peji nepeji, ine Epsom Printer Scanner; uyezve nemafaira emufananidzo, ini ndakakwanisa kugadzirisa nekugadzirisa chinyorwa chimwe nechimwe zviri nyore uye zvakananga muchirongwa chimwe chete; Kubva ipapo ndinogadzira zvinyorwa zvakapusa zvemavara, uye neizvi ini pakupedzisira ndakateedzera, ndikanamatira uye ndikagadzira yekupedzisira uye kugadzirisa pamwe neRich Text Mhariri weLibre Office. gImageReader inobatsira chaizvo uye yakanaka ... Zvekare ndinokutendai zvikuru uye Zvikomborero ... Pachokwadi: DaBry.O.Díaz